Faahfaahin: Iska Hor imaad ka dhacay maanta Xerada Jen. Gordon ee Muqdisho | SAHAN ONLINE
Faahfaahin: Iska Hor imaad ka dhacay maanta Xerada Jen. Gordon ee Muqdisho
MUQDISHO – Warar kala duwan ayaa ka helaynaa iska hor imaad maanta duhurkii ka dhacay Xerada Jen. Gordon ee degmada Hodan,waana xero xarun u ahayd Imaaraadka carabta oo tababar ku siin jirtay ciidamada Soomaaliya.
Iska hor imaadka ayaa markii hore ku bilowday muran ka dhashay hub iyo gaadiid ku jiray gudaha xerada oo la doonayay in lagala baxo.
Wararka ayaa sheegaya in iska hor imaadka uu markii hore ka dhacay gudaha xerada,kaddib markii Ciidanka uu tababaray Imaaraadka ay ka hortageen isku day la doonayay in gaadiid iyo hub lagala baxo xerada.
Warar kale waxa ay sheegayaan in hub lagala baxay bakhaarada keydka hubka oo la jabsaday,lama oga inta uu gaarsiisan yahay hubka laga qaatay xerada.
Ciidamo ka tirsan Xoogga dalka oo ka baxay Xerada Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa gaaray xerada Jen. Gordon kuwaasoo isku gadaamay xerada iyo agagaarkeedka.
Wararka ayaa sheegaya in saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ay ku lug leeyihiin isku dayga la doonayay in xerada lagala baxo hub iyo gaadiidka dagaalka.
Xaalada ayaa hadda si caad ah kusoo laabatay,waxaana amniga la wareegay ciidamo ka tirsan kuwa milatariga oo ciidamada loo yaqaano Koofiyo Gaduud.
Illaa hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay iska hor imaadka,waxaana uu saameeyey xaafado dhowr ah sida aagga Warshada Caanaha,kulliyadii Jaalle Siyaad iyo xaafado kale.
Taliska Ciidanka Xoogga dalka kama aysan hadlin iska hor imaadka ka dhacay xerrada,waxaana arrintan ay imaanaysaa maalin kaddib markii Taliska uu shaaca ka qaaday in uu la wareegay xerada iyo qalabkii yaala.